I-Herpes phezu izindebe - ifomu lalivamile igciwane. It kubonakala ngesimo amabhamuza encane ubuhlungu. Ngo esigabeni sokuqala lesi sifo, sibhekene ukuncinza kanye ukulunywa, khona-ke usevele ibhamuza, futhi esigabeni sesithathu siyaqhekeka, futhi okuphuma emlonyeni lokhu kungcolisa ketshezi, bethwele igciwane. In esigabeni lokugcina kwakheka uqweqwe, okuyinto akufanele zisuswe, njengoba lokhu kungaholela ekwakhekeni isibanda encane.
Lesi sifo wadluliselwa oxhumana ezivamile, ngakho ngaphambi ngokushesha kangakanani izilonda abandayo phezu izindebe ukuphulukisa, khumbula imithetho elula eyokusiza ugcine abathandekayo egciwaneni. Ngesikhathi egula, sebenzisa kuphela endishini ehlukile, ungathinti ezindaweni ezithintekile izandla, ukuze singathwesi uthumele ukutheleleka kwezinye izindawo kwesikhumba. Futhi ngabe yikuphi hhayi Kiss. Uma uqaphela i-herpes on the izindebe, ezichazwe ngenhla izimpawu, kufanele ngokushesha uqale imithi. Kungaba yokugcoba ahlukahlukene kanye amaphilisi, okuyinto ukuvimbela ukuvela igciwane amangqamuzana amasha.
Kanjani ngokushesha ukwelapha ezilondeni abandayo phezu izindebe, ongamtshela Folk imithi. izindlela zayo nazo ngempumelelo. Nazi ezinye izindlela ezilula.
Ungenza lotion Mint. Ukuze wenze lokhu, nezinkezo ezimbili (wezipuni) amahlamvu asanda abelethwe uthele ezimbili izinkomishi zamanzi abilayo, ake it yenza kancane bese nzima ukumnika. Njalo ngehora, kubalulekile ukuba Sula wesakhiwo ogulayo.
nomphumela omuhle kulabo ufuna ngokushesha ukwelapha ezilondeni abandayo phezu izindebe, futhi okusajingijolo. Ukuze wenze lokhu, amahlumela ngesikele sokuthena fresh ochotshoziwe futhi incumbe okuholela gcoba ezindaweni ezithintekile.
kwentwasahlobo wenze tincture utshwala ye birch nemiqumbe futhi ukugcina wona ukuze agcinwayo izimfanelo zayo eziwusizo endaweni emnyama ngesikhathi temprature akangaphezu degrees 20, ngakho ngokushesha kanjani ukuqeda izilonda ezibandayo phezu izindebe, ungasebenzisa birch efihlekile. Ukuze silungiselele i tincture utshwala Kufanele ugcwalise amabili (nge-slide) wezipuni birch efihlekile utshwala ingilazi. Phakathi ukwelashwa kubalulekile Sula swab oswakanyiswe tincture, izindawo ezibuhlungu.
Indlela kunazo owaziwa futhi kulula ukuqeda herpes kuyinto i eggshell, noma kunalokho, plenochka ku amagobolondo amaqanda. It isetshenziswa ezindaweni elikhanyayo futhi ushiye ukuba yome ngokuphelele.
kusiza kahle kakhulu wokuxubha, umane gcoba it ezindaweni ubuhlungu bese ulinda 20 amaminithi, ke hashaza ngamanzi. Le ndlela iphumelela kakhulu kulabo abazi kanjani ukuqeda izilonda ezibandayo phezu izindebe, uma ezinye izindlela musa asize. Engingakusho nje bagcobe kathathu ngosuku uzobona elamukelekile.
Ungazama futhi nesweli. Ukuze wenze lokhu, usike clove, engeza wezipuni ambalwa yogurt isipuni yekhofi osheshayo, uju kanye ufulawa kakolweni. Ingxube wafakwa wagqoka gauze futhi isetshenziswa ezindaweni ezithintekile.
umphumela Rapid elwa namagciwane has futhi Aloe. kumele inyama yakhe isetshenziswa ezindaweni ezithintekile sezindebe kaningi ngangokunokwenzeka.
Zonke Kulezi zindlela ezingenhla, aphumelela. Nokho, ukuze ngingasebenzisi ukwazi njalo erhabekileko, indlela izilonda abandayo ngokushesha ukuphulukisa izindebe, zama ukuba amxwayise. Ukuze wenze lokhu kaningi ngihambahamba, ukudlala ezemidlalo, musa uthole novalo bese uyazama hhayi ukuba endaweni lapho kukhona okusalungiswa.
Ukucinana kwemigudu yomoya emaphashini: izimpawu ezinganeni
Yeka indlela okuyingozi kuyinto ukuguguleka wesibeletho? Ukwelashwa nge amakhandlela izindlela zesintu
Abahlanganyeli we "Stand-" (TNT): Umlandvomphilo nokuphila kwabo siqu
Iresiphi elula: Salad nge turkey